Vakuru veZFTU Votatsurirana Nyaya yeHutungamiri Hwesangano Iri
Sangano reZimbabwe Federation of Trade Unions, ZFTU, rapindwa nemakakatanwa ehutungamiri, sezvo mamwe mapoka evashandi ari pasi pesangano iri, akaita musangano wekubvisa mutungamiri hweZFTU, VaAlfred Makwarimba pamwe nemutewedzeri wavo, VaJoseph Chinotimba.
Musangano uyu wakaitwa mukupera kwesvondo muBulawayo, uye mapoka akapinda mumusangano uyu akawirirana kudzinga hutungamiri uhwu, achihupomera mhosva dzekusiya gwara remusangano, kuita zvehuwori pamwe nekukurudzira kupesana kwemarudzi.
Zvinonzi pamapoka makumi matatu nematatu ari muZFTU, makumi maviri nemashanu akapinda mumusangano uyu uyo wakasarudza VaPeter Mpofu kuti vave mutungamiri mutsva.
Asi hutungamiri hwaVaMakwarimba, kuburikidza nevaive munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko, VaKennias Shamuyarira, huri kuramba kuti hwakabviswa pachigaro, huchiti musangano uyu waive kunze kwemutemo.
VaShamuyarira vati musangano wakaitwa kuBulawayo uyu wakarongwa naVaChinotimba, avo vavati munhu ari kurwisa kubvuta hutungamiri hweZFTU. Studio 7 yatadza kubata VaChinotimba kuti tinzwewo divi ravo.
Asi muhurukuro yaita Jonga Kandemiiri weStudio 7 naVaShamuyarira, VaShamuyarira vati nyaya iyi yatove mumaoko emagweta esangano ravo uye vari kuronga kuita musangano neChishanu svondo rino.